काठमाडौं – बडा दसैंलाई हिन्दुहरूले महान चाडका रुपमा मनाउँछन् । दसैंको पहिलो दिन पूजा कोठामा जमरा राखेर घटस्थापना गरिन्छ भने अन्तिम दशमीका दिन जमरासँगै टिका लगाइन्छ ।
मोटो भएर हैरान हुनुहुन्छ त्यसो भएर खानुहोस अकबरे खुर्सानी, हुन्छ यति धेरै नसोचेका फाइदै फाइदा
कुहिनामा कालो दाग आएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी हटाउनुहोस् सजिलै हटछ
राति निन्द्रामा बरबरराउदै किन हिँड्छन् मानिसहरू ? यस्तो रहेछ कारण
आँखामा बसेको डार्क सर्कलका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ ? यसरी सकिन्छ हटाउन